Google, Yahoo sy ny hafa nahazo alalana ho any Kiobà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Marsa 2010 19:45 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, বাংলা, English
Notsenaina tamin'ny tsy filazana na inona na inona tamin'ny fampielezam-peo tao Kiobà, raha ny tao anatin'izay ora vitsivitsy izay aloha, ny fanapahan-kevitra farany navoakan'ny Departemantan'ny fitantanambola tao Etazonia mba hisokafan'ny teknolojia amerikana amin'ny fiaraha-monina (firenena) nanakatonana izany.
Ny tanjon'ny Fitantanam-bola moa dia ny “hahazoana toky fa misosa ny fifanomezam-baovao,” ao anatin'ny fanandraatana fa “hisy fiantraikany politika eo amin'ny sehatra maro izany.” Saingy milaza zavatra amin'ny sakana goavana indrindra ny setriny bitika hita an-tserasera : ao anatin'ny fahazoana miditra aterineto no ahafahan'ny valantserasera miasa tsara.
Araka ny filazan'ny Fikambanamben'ny Fifandraisandavitra Iraisam-pirenena, dia ny 13%n'ny Kiobàna ihany no tafiditra amin'ny folihala (tranonkala), raha 31 sy 10% kosa izay ho an'ireo firenena roa hafa niharan'ny ankivy, Iran sy Sodan.
Nomarihan'ny tontolom-bolongana Kiobàna — na bolongana avy any amin'ny nosy izany na avy amin'ireo ampielezana– niteny naningatsingana ny fihetseham-pony. “Hampiasain'ny mpanao jadona ho azy manokana izany, satria tsy mahazo alalana hanana aterineto ny olona any Kiobà,” hoy i El Colmo ao amin'ny Diario de Cuba.
Nampian'i Juan Rodriguez ao amin'ny Diario de Cuba ihany izany:
La dictadura militar cubana nunca dejara que el pueblo cubano tenga servicios de internet en sus casas:Desde que se implanto la dictadura ‘revolucionaria’ de Fidel Castro, al pueblo cubano le han bloqueado los accesos a las fuentes internacionales de informacion…ellos saben que mantener desinformado al pueblo cubano garantiza la sobrevivencia de la propia dictadura.
Tsy hamela na oviana na oviana ny vahoaka Kiobàna hanana aterineto any an-trano izany ny mpitondra miaramila jadona: tsy navela hahalala loharanom-baovao iraisam-pirenena izany ny Kiobàna hatramin'ny nanombohan'ny jadona revolisioneran'i Fidel Castro…fantatr'izy ireo fa antoka hahatafajoro ny jadona mihitsy ny nanaovana ny Kiobàna tsy hahalala vaovao.
Tsy ny fahafaha-miditra (aterineto) ihany no mety hanova ny fihetsiky ny Kiobàna amin'ny fanalefahana ny fandrarana. Hoy i Havana Times nanoratra:
Mbola lohahevitra hafa ihany koa izany hoe maniry ny hampiasa ny orinasan'ny aterineto Amerikana izany ireo firenena ireo.
Ary raha idirana lalindalina kokoa ny any amin'ny fihetsika mankahala Amerikana, dia hoy ny Cuba Journal ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ny Fireharehan'ingahy Rehetra”:
Lazaiko fa ny hanaovan'ny imperialista izay hifandraisany bebe kokoa amin'ireo mersenera afeniny ao amin'ireo firenena telo ireo no nanaovany ireo lalàna vaovao ireo.
Ankilan'izany kosa, derain'ny mpamaham-bolongana mpijery ny politika(mpifandraisan’) i Etazonia-Kiobà Phil Peters ny fanapahan-kevitra:
Izany no fandrosoana; nahatratra na dia ny kabarin'ny Sekretaram-panjakana niresaka ny fahalalahan'ny aterineto ny lalàna vaovao.
Ary nisioka i Bloggings by Boz:
Noesorin'i Etazonia ny fandrarana rehetra momba ny fandraharahana tolotra aterineto ifanaovana amin'i Kiobà. Tsy manana an'iny fialantsiny iny intsony aloha ry zareo.
Na dia mety ho sarotra aza ny hiady hevitra ny amin'ny hametrahana lalàna mazava sy mangarahara hoe inona avy ny azon'ny orinasa tahaka ny Google sy ny Yahoo atao sy ny tsy azony atao any amin'ny firenenkafa, dia mbola lavitra amin'izay antenain'ny maro amin'ny Kiobàna sy ny Amerikana-Kiobàna ny dingana vita.
An'i manfrys io sary hajia ampiasaina amin'ity lahatsoratra ity, eo ambany alalan'ny Creative Commons. Ka tsidiho ny raki-tsarin'i manfrys.